ညနေခင်းရဲ့ဧရာ လွမ်းစရာ…………………….. | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Local Guides » ညနေခင်းရဲ့ဧရာ လွမ်းစရာ……………………..	25
Posted by ko pauk mandalay on Aug 2, 2012 in Local Guides, Photography, Travel | 25 comments
2ယာယီဆိပ်ကမ်း အရင်ကဒီနေရာလေးမှာ ရေမရှိဘူးလေ
3 ဒီနေရာနေ စစ်ကိုင်းတောင်ကို လှမ်းကြည့်ရင် လွမ်းစရာကြီးပါဗျာ
4 လက်ပန်တွေပွင့်တုန်းက ဒီအပင်ကြီကို ဆော်ခဲ့နှက်ခဲ့ဘူးတယ်
6 မရိုးနိုင်သော ညနေခင်းနေခြည်နဲ့ရွေရည်လက်နေသောဧရာမြစ်ပြင်
8 အလှကလေးကို မြင်အောင်ကြည့်နော်
10 နေအညိုရွှေအိုရောင် ထပ်ပျော်တံငါ ငါးမျှားတံ ရေပြင်အပ်ပါလို့ သူစောင့်တဲ့အရပ်
11 ဧရာနဒီ ညနေခင်းလေးအလှ
12 ကျနော်အတွက်မရိုးနိုင်သော မြင်ကွင်းနဲ့ မကြာခဏရိုက်ဖြစ်သောမြင်ကွင်းများပါ
13 ရေပေါ်က ဖောင်ကလေး နဲ့တိမ်ပန်းချီ
ko pauk mandalay has written 1110 post in this blog.
P chogyi says: ကျေးဇူးပဲ ကိုပေါက်ရေ
မရောက်ဖြစ်တာ နှစ်ပေါင်း ၂၀ နီးပါးရှိသွားပြီ
အခု ဧရာကမ်းက ပုံလေးတွေကြည့်ရလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ပင်လယ် ပျော် says:ှဦးပေါက်ရေ…ဂေါဝိန်ဆိပ်ကမ်းကိုကြည့်ပြီး မန္တလေးကို လွှမ်းလိုက်တာဗျာ….တစ်ခါပြန်လာချင်သေးတယ်ဗျာ…မန္တလေးသားတွေရဲ့ အပြုအစုကို လည်းသတိရတယ်ဗျာ…
YE YINT HLAING says: စိမ်းစိမ်းစိုစို နဲ့ ပုံ ( ၄ ) ကိုကြည့်ပီး လွမ်းမိသွားတယ်ဗျာ !
snow white says: ပုံလေးတွေကြည့်ပြီး စိတ်အမောပြေသလိုခံစားသွားပါတယ် ။။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီပုံလေးတွေက မန္တလေးက ရွှေကြက်ယက်သွားတဲ့လမ်း ကန်ပါတ်လမ်းပါ။
mocho says: လေးပေါက် ရေ
အရင် တုန်း ကဆို ဓါတ် ပုံ ရိုက် ရင်လူ ပုံ မပါ ပဲ ရှု ခင်း တွေ ချည်း ပဲ ရိုက် ရ ကောင်း မှန်း မသိခဲ့ ဘူး။
ဂေဇတ် ထဲ ရောက် မှ အထူး သဖြင့် လေး ပေါက် ရဲ့ ပုံ လေး တွေ ကို သဘော ကျ မိ ရာ မှ ရှု ခင်း အလှ တွေ ကို မှတ် တမ်းတင် ရ ကောင်း မှန်း သိလာတယ်။ ဒီ တခေါက် ခရီး ထွက် တော့ လေး ပေါက် ကို အား ကျလို့ ရှု ခင်း ပုံ တွေ တော် တော် များများ ရိုက် ဖြစ် ခဲ့ တယ်။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: မိုချိုရေ
ကျနော်လူပုံရိုက်ရင် ခြေမပါလက်မပါ ခေါင်းပြတ်ဖြစ်တော့ အဆူခံရတယ်လေ။
အဲတော့ ပြန်မပြောတဲ့ ရူ့ခင်းပုံဘဲရိုက်တော့တယ်။
ရဲစည် says: မျှဝေခံစားသွားပါကြောင်း
aye.kk says: နေညိုရည်၊နဒီခင်းက…
ဦးဦးပါလေရာ says: ပုံ(၁)က ကလေးတွေရယ်
ko khin kha says: ဟုတ်ပ ဦးဦးပါလေရာ ရေ။ အခုတော့ ရေဖွေးလို့ပြည့်နေကြောင်းပါ။
ဒါတောင်မန်းက မိုကောင်းကောင်းမရွာသေးဘူး ရွာလို့ကတော့လျှံမလားဘဲဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4637
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: နံပါတ် ၆ နဲ့
၁၂ ပုံလေးတွေကို ကြိုက်တယ် အမရေ ..
အဲ .. ဟုတ်ပါဘူး .. ဖေဂျီးရေ … :D
ကြည့်ရှု အားပေးသွားပါတယ်ဂျာ ..
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9985
မောင်ပေ says: အဲဒီညနေချိန်ခါ
မဒေပမ် နဲ့ အတူ
ဇွဲမာန်(အင်းဝ) says: လက်ရာကတော့မပြောချင်တော့ဘူး၊ ဘယ်လိုပါရမီရှင်လည်းမသိ၊ ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်….ငိုတာချည်းပဲ..အဲဟုတ်ပေါင်..ဘယ်လိုရိုက်ရိုက်အလှတရားတွေကပေါ်လွင်တာချည်းပါပဲလားအကိုပေါက်ရယ်…သဘာဝတရားကြီးကိုအမြင်တွေနဲ့တစ်ကွက်ချင်းပြသပုံတွေကကောင်းလှပါဘိ၊
marblecommet says: ငါးမျှားနေတဲ့ပုံကို အကြိုက်ဆုံး
ငါးမျှားတံတစ်ခုကို ချထားပြီး ငါးရရ မရရ
ကြောင်ကြီး says: အလှတရား
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နှမနွား ငါ့အားခဏငှားပါ။
Ma Ei says: ဒီတစ်ခါ post ကတော့
ပုံကလေးတွေ နဲ့ ရေးချယ်မှုန်းထားတာပါလား
6..ဧရာမြစ်ပြင် ကို အကြိုက်ဆုံးပါ…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဟုတ်ပါ့ မအိရေ။
mamanoyar says: အောက်ဆုံးပုံကဖောင်လေးစီးချင်တယ်
မွန်မွန် says: (၁) နဲ့ (၈) ကို ကြိုက်တယ် လေးပေါက်… မမြင်ရတာကြာတဲ့ မြင်ကွင်းတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ….
အဲဒါ ဂေါဝန်ဆိပ်လားဟင်.. ပေါ်တော်မူတဲ့ နေရာပေါ့နော်…
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ဒီနေရာက ဧရာဝတီမြစ်အရှေ့ဘက် အမရပူရမြို့နယ်ထဲမှာပါတဲ့ ကန်ပါတ်လမ်းပါ။
ဂေါဝိန်က ဒီနေရာရဲ့ မြောက်ဘက်စူးစူးမှာရှိပါတယ်။
နောက်ရက် အားရင် ဂေါဝိန်ပုံတင်ပေးပါမယ်.
နှင်းဆီ ငုံ says: လေးပေါက်ရေ (၁)(၅)(၉) ကိုကြိုက်တယ် ချစ်စဖွယ်လေးတွေ
သူတို့ဘ၀တွေက ကြမ်းတမ်းနေမှာပေမယ့် ပုံရိပ်လေးတွေက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: နောက်ရက်တွေမှာ ဧရာပိုစ်တွေဆက်တိုက်တက်လာပါအုံးမ.ယ်
မွန်မွန် says: ကျေးဇူးပါ လေးပေါက်ရေ… ဧရာဝတီအမည်ခံဒေသမှာ နေပေမယ့် ဧရာဝတီမြစ်ဆိုတာက အဝေးကြီးမှာပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel reply